OROMUMMAA FI HABASHAA!-Seenessoo Gabaabaa-Beekan Gulummaa Irranaa’ti – Beekan Guluma Erena
OROMUMMAA FI HABASHAA!-Seenessoo Gabaabaa-Beekan Gulummaa Irranaa’ti	Beekan Guluma Erena
AFOOLA/OROMO FOLKLORE, Books, Education April 10, 2016January 5, 2017#OROMOREVOLUTION, CORA SEENAA KEESSAA	22 Comments
817SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
H-A-B-A-SH-A-A fi OROMUMMAA!!
Rakkoon kun ummata Oromoo biraa osoo hinhafiin asfulla’uudhaan ummaticha burjaajessuu itti fufe. Lubbuu qaqqaalii hedduunis Oromummaa Oromoo keessa tursiisuuf jettee osoo galma hinga’iin badde. Kanaanis lubbuun gootota akka J. Taaddasaa Birruufi kanneen isa fakkaatan (Dargiin kan dhuman)fi lubbuun dargaggoota barattoota Oromoo bara 1990’moota keessa bade bara baraan Oromootaan yaadatama. Nuti dhaloonni har’aa kun imaanaa warreen darban nutti kennan osoo galmaan hinga’iin karaarratti cooliguu isaatti xiiqofnee ka’uun nurraa eegama. Goototni darban wareegama hanga lubbuu kan kaffalan Oromummaa Oromoo keessatti lafa qabsiisuufi warri har’a jirru afaan guuttannee “Ani Oromoodha” jennee akka dubbannuuf, warra lafeefi dhiiga isaaniitiin siidaa Oromummaa nu keessatti ijaaranii darabnidha. Ajajaa Dhibbaa Maammoo Mazammir Oromummaa isaatiif jedhee yoo wareegamu, dhaamsi isaa inni dhumaa kan sodaan guutame osoo hintaane gootummaafi Oromummaa isaa kan agarsiisuufi warra lubbuun hafan keessattimmoo booree kan uumu jechisaa dhumaa akkas ture. “Dhiigni koo mirga ummata Oromoo kabachiisuuf kan dhangala’edha malee bu’aa malee kan lafatti bade miti. Dhiigni koofi kan gootota Oromoo baay’ee gara fuulduraattis dhangala’uu danda’u mirga ummata Oromoo kabachiisuun isaa waan hafu miti”. Olaanaa Zoogaa, 1985:428.
©Beekan Guluma Erena, 2017
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa817SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← HIRPHAAN EENYYUU?
MAALIIF AFAAN OROMOO BARANNAA? →
22 thoughts on “OROMUMMAA FI HABASHAA!-Seenessoo Gabaabaa-Beekan Gulummaa Irranaa’ti”	abdiiApril 10, 2016 at 8:16 pmPermalink	beeka keenya waan baayyee nu barsiiste guddaa .galanni kee bilisumma haa tahu jedha.jabaadhu umrii nuuf dheeradhu.
Reply	LataaApril 10, 2016 at 8:45 pmPermalink	Wan garii nu barsistan dr bay’ee nuf galatomaa.
Reply	Shabu HamzaApril 10, 2016 at 8:50 pmPermalink	Galaattomi gummachikee daraan itti hafuffu. senaara waa heddutu fudhatamaa nama ittin hojaatu yoo argatee sena namni qorachuudhaf iyaafatu yokaan dubisuu hubanoo gaha gafataa isaa bekaan kenyaa akkasiti nu maxansee akkatan nuti qoraane itti hubataa jiruu kunimo akkam? yeroo kamu kan gafii natii tahu senan gotaa tokko kan senneefammu malif kutanno akkani nuf kenuf kakkahumsaa ejaano garii akkani nuf tahufi haraa garu akka ilaalcha kottiti kun mullatta hin jiruu jedhaa galtoo.
INNJIFFANNON KAN SABA OROMMOTII!
Reply	HirphasaaApril 11, 2016 at 4:30 amPermalink	Waan bareedaa barreessite; baay’ee galatoomi. Asirratti wantin ani jala muree dubbachuu barbaadu, Oromoon, aadaan isaa, seenaan isaa, biyyi isaa, angoon isaa, beekumsii fi qabeenyi isaa kana booda baldhachaa, guddachaa, dagaagaa deema malee duubatti hin deebi’u.
Reply	Marsimoy GurmessaApril 11, 2016 at 4:47 amPermalink	Haadhooko! nuuf jiraadhu,Raagii jedha.Nu dhaloota Qubeef qaroo keenya ta’u kee hin dagaatiin!
Reply	Sanyii kumsaaApril 11, 2016 at 5:13 amPermalink	Beekaan ati dhugumaa nm beekadha! jechaan ittin si ibsu qabu maloo ammayyuu dhugaa jiru nuf baasii yoo hojjitti hiku banes dubbisu dadhabnu.garuu guyyaa haqni mul’atuu nuf dhufa obsan egna!
Reply	Aboonkeeti BD FayyisaaApril 11, 2016 at 5:31 amPermalink	“Oromummaan haqa malee miti maqaa” barreeffama jechoota shan (5) qofa qabu garuu yaadaan baay’ee ba’aa!
Reply	hanaApril 11, 2016 at 6:33 amPermalink	beekaa akkuma maqaakee nuu jiraadhu
Reply	Feyisa HirkoApril 11, 2016 at 10:19 amPermalink	ummurii dheeraa nuf jiradhuu!!! keenna addaa waaqnii sif keenen ummaatakee tajaajilaa jirtaa.ammaas abdii guudda sirraa qabnaa kanumaan caala akka seenaa nubarsiiftuu.qabsoon itti fuufa hangaa bilisummaan dhuftuutii….
Reply	Guutaa BahaaruuApril 11, 2016 at 10:48 amPermalink	jabaadhu yaa sanyii leencaaa!! kan akka keetii nuu hori, coqorsa ta’ii nuu bal’adhu!!!!! Bishooftuu irraa.
Reply	rabbirraaApril 11, 2016 at 1:47 pmPermalink	ulfaadhu hayyuu Kenya. hamaan qarookee hin argatii !
Reply	Gansharo Gumato WegeApril 11, 2016 at 9:17 pmPermalink	Addunyaa tana irratti diinni Oromoo kan uumame guyaa Habasoonni kibba Arabiyaa biyya Saabaa ykn “Sheba land” (Yeman) irraa galaana diimaa asceeyanii biyya Kuushi/Oromootti qubatani dha.
Kanaafuu diinni Oromoo kan waggootii kumaatamaa qofa osoo hinta’in kan fuulduraas waggaa kumaatama dhufu nunyaataa fi walnunyaachisaa juruu bara baraa itti fufuu barbaadu dha.
Qophaa’inni Qabsoo ummata Oromoo sadarkaa fi tooftaa diinna hammanaa ittiin cabsuu danda’u ta’uu qaba.
Yerooma kamiiyuu,diina hammaataa akka Habashaa sana cabsanii bilisummaa dhugaa ginfacuuf waan 8-10 qabaachuun murteessaa dha.
1.Ummatni keenya sadarkaa adda addaatti:
a) Dammaqiinsa cunqursaa (awareness);
b) Rifannoo(be sensitized) ykn aarii cunqursaa bara dheeraa fi kan yeroo irra gahaa jiruu irratti qabacuu;
c)Kaka’umsaa(motivation) diina fi cunqursaa ofirraa faccisuun qabaachuu fi;
d) Gocha/tarkaanffii (action) duubatti hindeebine diina irrati fudhachuu..
Barreefamni gaggabaabaan Guutaa Baaharuutin tanaan oliti dhiyaate osoo tajaajila midiyaa gagaraa kan akka OMN Tv,tamsaasa Radiyoo tin ummata bira ga’ee dadammaqina ummataa tiif baa’ee
fayyada waan ta’eef itti yaaduun barbaachisaa dha.
2.Gurmmaa’na ummataa yoo ta’u inni kun caasaa fi beekumsa seenaa,siyaasaa kaayyoo, galmaan tin … ifaan ifatti kaayamee midiyaa adda addaa tin barumsi irratti kennamuu qaba.
3.Hidhannoo fi meeshaa woraanaa, sadarkaa adda addaa tti akkasumaas tekinikaaf beekumsa gaggessummaa qabsoo woraanaa qabaachuun murteessaa dha.
4.Qabsaa’uu dha.Kunis egaa toiftaa adda addaa kan barbaachisu yoota’u inni tokko kanuma amma Dhaloonni Qubee fi Qeerroon Oromoo jalqabe kana ta’ee garuu dhiyeenatti argamuu dhan qaama gaggeesuu qabaachuun murteessaa dha.
Akkuma Farajiin jettu”Hit the Iron When it is hot/red”! Diinni waggootii 3000 ykn sanaa oli kun hafuura gLfannaan toiftaa jijjiiratee humna waan jabeefatuuf akkuma laayyootti cabuu didduun ni mala. Habashootni yeroo baa’ee tooftaa sanaan kufaa-ka’aa asi gahanii jiru.
5.Tokkummaa Ummataa Oromoo yoo ta’u ummatni wolqabatee,wolii birmatee anniisaa tokkummaatin yoo duulee humna guddaa ykn jabaa qofa osoo hinta’in shakkii yokko malee yeroo gabaabaa keessatti diina kamiiyuu cabsuu danda’a.
Qabsii Ji’oota 4n dabran keessatti osoi OPDOn diina jala galuu diddee Tigreen sa’aa 24keessatti Oromiyaa gadilakkiftee ,qabeenyuma saamtee tuulattee sanas gattee baqatti ture.
Garuu maalgonaree!?wanti hundinuu guyyaa ufii eeggatti!!!
6.Odeefannoo haala diinaa (Security) ykn diina guyyaa guyyaan basaasuu dhaan bayaa gala isaa beekuun murteessa dha.
7.Diplomacy: Akkuna beekamu yerii ammaa addunyaa tana kan bulchaa jiran biyyoota gurguddoo akka Ameerikaa, Ingiliizii,Faransaayi … Rashiyaa,Chaayinaa fa’a yoo ta’an keesummattuu Ameerikaa qabachuun baa’ee murteessaa waan ta’eef beektonni Oromoo marti waan danda’an hunda qodhuu qaban.
8.Seenaa Oromoo: kan jaarraa hedduuf Habashootaan danqamee,awwaalame,garuu Faranjiin biyya garagaraa haala qorannotin barreesani bakka bakkatti fafaca’ee jiru sana hamma danda’ame waliti guuramee ,gurmaa’ee,beekttonni Oromoo referaansii sana irratti hundaa’uun seenaa dhugaa ta’e affaan Oromoo tii fi Ingiliffaan osoo barreesaa kitaabatti jijjiiraa ummataan gahanii baa’ee gaarridha jedha.
Reply	Booree D GApril 12, 2016 at 6:49 amPermalink	Agartee yaada seenaa bibilchaatoo akkanaa walii hiruun, Ilaalchi Eenyummaa Oromummaa dhaloota keessatti jabaatee haala egeree saba keenyaa ijaaruun ibsamuunis ta’e barreeffamuun, keessattuu Dhaloota keenya ammaa isa dhimma eenyummaa isaa hubachuufis ta’e dagaagsuuf dadammaqaa ta’e kana karaarra buusuu keessatti iddoo guddaa qaba. Jabaadhu goota biyyaa, Egereen kee, keenyas Ifaa dha!
Reply	juharApril 12, 2016 at 7:12 pmPermalink	Si jaallaana!!
Reply	bari gooytaApril 13, 2016 at 11:51 pmPermalink	jabaadhu!!!!!!
Muknilleen baala qaba nuti wal malee maal qabna..
Reply	Luiz birboApril 29, 2016 at 1:25 amPermalink	gudda galatomii,halumaa kanan seenaa nu barsisu jabadhu itti nu fufi.
Reply	Addu HamApril 29, 2016 at 5:40 amPermalink	Abdi saba kenyaati ati,waan barreessitu mrtii nuuf baruumsa. hubannnoo guddaa nuuf laataas………Galanni kee guddoo.Ebbifami!
Carroomnaan,Kan akka tasaa Fb irraa argu qofa osoo hin taane dhaabbataan barreeffamoota kee argachufan hawwa
Reply	AnonymousMay 1, 2016 at 10:04 amPermalink	Baayyee si jalannaa akkanumaati itti nu fufii galannii kee Bilissumumaa haa ta’u
Reply	lalisaa qananiiMay 1, 2016 at 6:57 pmPermalink	Beekaan keenya si’uma. beeka dhaloonni qubee qabdu ija uummata Oromoo galanni koo bilisummaa haa ta’u jabaadhu
Reply	Getahun Alemu BorenaFebruary 17, 2017 at 10:27 amPermalink	Beekan; baay’ee baay’ee galata qabda addattuu waayeen hiika habashaa fi abisiniyaa jedhu kun namoota keenya biratti adda bahee waan beekamu miti akkasumas habashoonni yeroo Itoophiyaan keenya jedhanii ittin of waaman maqaan kun moggaasa isaanii akka ta’etti namoonnii keenya hedduun ni fudhatu. kanaafuu akka yaada kootii ergaan ykn hiika kana gama miidiyaa hawaasaatiin osoo tamsaastee hawaasa keenya biraan osoo nuuf geessee maal qaba laata?
Reply	AnonymousMarch 19, 2017 at 1:57 pmPermalink	Habashoonni dhaloota qubeen yeroon isheen galtu dhiyateera.Beekaan kenyaa atimmo umuri nu dheraadhu sin jedha
Reply	lencha yigazuApril 24, 2017 at 12:45 pmPermalink	Beekan nuuf jiraadhu hedduu si jaalannaa